Fiaramanidina Aerobic - Hoatrinona no halehako?
Hatraiza hatraiza no tokony halehako?
Rehefa manainga vatomamy dia manana hevitra tsara ianao ny fomba tokony hanaovana ny asa. Mitsangàna, midina, imbetsaka ny famerimberina amin'ny lanjany, mety averina amin'ny sehatra maromaro. Mety miankina amin'ny isan-jaton'ny habetsahanao azonao avoaka na amin'ny tantaran'ny zavatra efa noraisinao teo aloha. Ao amin'ny dobo filomanosana, ahoana no ahafantaran'ny mpilomano fa mahavita milomano ny vokatra fanatanjahantena? Izany dia miankina amin'ny vokatra izay tianao amboarina - anaerobic na aerobic metabolism.
Ny filomanosana rehetra dia manana singa amin'ny tsirairay, miaraka amin'ny fandraisan'anjaran'ny asa aerobika rehefa mitombo ny fihenan'ny fihenana. Ny mpilomano dia mila mampivelatra ny roa amin'ireto sehatra ireto - ny asa atao anaerobianao dia tsara atao amin'ny haingana indrindra haingana, noho izany dia tsy tena manan-danja loatra ho an'ny ankamaroan'ny mpilomano ny fametrahana haingana - mandeha haingana araka izay vitanao ianao! Ny halavirana lavitra sy ny habetsaky ny fitsaharana eo anelanelan'ny volombava dia manampy amin'ny famaritana ny haingana azonao hilomano ny famerenana; Ny asa dia mamaritra ny haingana sy ny fampiofanana. Misy ihany koa ireo antony maro hafa, anisan'izany ny isan'ny tsipika nalaina isam-bolana na isan-tsegondra (ny halaviran-dalana na ny tadidy) - ny karazan'asa tsirairay tokony hamita ao amin'ny fivoriana iray, isan-kerinandro, na ny fiofanana momba ny fiofanana - ary ny fomba manao fandaharana mba hahazoana ny ankamaroan'ny zavatra ataonao.
Tsy mora ny mikendry metabolism aerobika. Ny USA Swimming dia mampiasa lisitra ankapobeny amin'ny karazan-drivotra telo samihafa.
Fanatanjahan-tena maro no mampiasa rafitra iray mitovy amin'izany mba hamaritana ny haavon'ny asa. Ireto misy famaritana ireto eto:
Minitra fiantohana kely (EN1) - saika lavitra, miaraka amin'ny fialana sasatra (latsaky ny: 30 segondra) eo anelanelan'ny famerimberenana, marefo amin'ny dingana maharitra sy mora. Io karazana asa io dia maharitra 15 ka hatramin'ny 60 minitra (na mihoatra). Manampy amin'ny fananganana sehatra fototra izany ary mampiroborobo ny fahasitranana. Ohatra iray: 6 x 500 metatra amin'ny paikady EN1 miaraka amin'ny: fifandimbiasana 15 segondra eo anelanelan'ny famerimberoana na 6 x 500 @: 15 sisa, EN1.
Fisorohana fiatoana (EN2) - mahazatra lavitra mihoatra ny 500 metatra miaraka amin'ny: 60 segondra miala sasatra eo anelanelan'ny famerimberenana, marefo amin'ny haingam-pandeha haingana kokoa noho ny EN1 (hojerentsika hoe haingana kokoa kely aty aoriana). Ity karazana setroka ity dia mila 20 ka hatramin'ny 45 minitra (na mihoatra) ho fenoina ary tokony hampitombo ny fahafahanao manao asa aerobika nefa tsy miteraka fanafody entina amin'ny hozatra, fa tokony hanaraka ny andro mora hanaovana izany mamerina ny fivarotana glycogène ho an'ny muscle. Ohatra iray: 8 x 175 @: 20 fitsaharana, paikady EN2.
VO2Max Endurance Pace (EN3) - mahazatra lavitra lavitra 300 metatra miala sasatra eo anelanelan'ny: 20 segondra ka hatramin'ny fotoana mitovy amin'ny habetsaky ny asa vita (1: 1 asa ho an'ny fialan-tsasatra) haingana kokoa noho ny EN1 sy EN2 (manàna faharetana - ho tonga eo). Mety tsy ho afaka hitazona io haingana io mandritra ny 30 minitra mahery ianao. Ity karazana asa ity dia mety simba ny fiantraikan'ny fihazakazahana iray manontolo. Asa sarotra be izany ary tokony arahin'ny karazana fanarenana indray hamerenana ny fivarotana glycogen ho an'ny muscle. Ohatra iray: 8 x 100 @: 45 fitsaharana, paikady EN3.
Zava-dehibe ny mandanjana ny ezaka ataonao mba hisorohana ny fanofanana. Ataovy ny ankamaroan'ny asa ataonao amin'ireo fiaretam-paharetana ireo, manao karazana karazana isan-kerinandro.
Ny fitsipika ankapobeny dia ny 50% EN1, 30% EN2, 10% EN3, ary mitoetra 10% nozaraina antonona fihenan-dàlana (mora kokoa noho ny EN1) sy ny haingam-pandeha haingam-pandeha haingana. Na dia afaka mandray soa avy amin'ny asa haingam-pandeha aza ny mpilomano dia tsy mila ny ankamaroany. Afaka manatsara haingana ianao amin'ny alàlan'ny fiasanao amin'ny fiaretana.
Tadidio fa aza manolotra teknika haingana. Mila mandresy fifandanjana ianao; Ny mpilomano faran'izay haingana indrindra dia ireo izay mihazona ny teknika tsara indrindra amin'ny haingam-pandeha haingana indrindra mandritra ny fotoana lava indrindra. Raha vao manomboka ianao dia ho tsara kokoa aminao ny hitazona izany fomba tsara izany raha mbola azo atao.
Ok, avy eo ... inona no vitako amin'ny EN1, EN2, na EN3? Ilainao ny mamaritra ny karazana fehezanteny fototra na ny fanombohana.
Navoakan'ny Dr. John Mullen ny 26 aprily 2016
Ao amin'ny dobo filomanosana, ahoana no ahafantaran'ny mpilomano fa mahavita milomano ny vokatra fanatanjahantena? Izany dia miankina amin'ny vokatra izay tianao amboarina - anaerobic na aerobic metabolism. Ny filomanosana rehetra dia manana singa amin'ny tsirairay, miaraka amin'ny fandraisan'anjaran'ny asa aerobika rehefa mitombo ny fihenan'ny fihenana. Inona no karazana fialan-tsasatra azonao atao mba hahitana ny lalao fiaramanidina an-dranomasina?
Voalohany, hamaritra ny paikadinareo (EN2) izahay.
Misy fomba maro samihafa azo atao mba hamaritana ity dingana fanombohana ity. Anisan'izany ireto:
Ny fanitsiana hikoriana vokatry ny vokatry ny folo x 100 yard (na metatra) dia mivezivezy amin'ny fialana sasatra, izay antsoina koa hoe fitsapana amin'ny fitsangantsanganana.
Mahomby kokoa ny fampihorohoroana (mety ho zatra amin'ny Borg Scale ianao).
Ny haavon'ny fo .
Fitsaboana mivantana ny halavan'ny loto .
Ny fitsapana T-30 (na ny kibony mivadika, dia milomano mandritra ny 30 minitra eo ho eo).
Fakana test T-30 . Fotoana fisedrana hafa, toy ny 1,000 metatra na metatra amin'ny dingana maivana indrindra, ary avy eo mizara amin'ny 10 mba handinihana ny tombanana ny paikady EN2 isaky ny 100.
Samy manana ny toetrany tsara sy ratsy izy ireo, ny maherifo sy ny mpanakiana. Ny dingana arahin'ny hetsika dia mifandraika aminao sy ny toetranao ankehitriny; Hiova izy ireo rehefa mahazo tsara kokoa ianao, noho izany dia mila averinao averina indray mandeha tsy tapaka ny dianao, angamba isaky ny roa ka hatramin'ny telo herinandro.
Ho ampiasaintsika ny fanandramana mody T-30, indrindra ho an'ny fahasamihafana.
Afaka atao amin'ny fomba maro samihafa izy io, azo ampiasaina amin'ny tsipika samihafa, ary mety ho mora amin'ny fitetezana tsy tapaka. Ny fisedrana T-30 novaina:
Mandritra ny 30 minitra vao vita.
Anisan'izany ny famerenana ny halaviran-dalana rehetra (mamaritra 200 na 400 aho).
Misy rantsana fohy eo anelanelan'ny famerimberenana (: 10 ka hatramin'ny 20 segondra).
Azo atao amin'ny haingana haingana kokoa haingana na haingana (mety hanosika anao roa na telo manandrama hanazava io haingana indrindra azo atao maharitra).
Raha fantatrao fa afaka manao 300 miverina ianao ary mihazona haingana amin'ny 4:30 ho an'ny tsirairay, dia mety hanao fanandramana T-30 mody toy izao: 8 x 300 @: 10 fitsaharana, miaraka amin'ny 4: 30/300 paix na haingana kokoa (fa raha mihazakazaka haingana ianao dia tsy maintsy mihazona haingana toy izany amin'ny 8!). Ny fomba iray hafa hamaritana an'io setroka io dia 8 x 300 amin'ny 4:40, mitazona ny haingana haingana indrindra ho an'ny sety (hanombohana famerenana vaovao isaky ny 4:40 ianao; ny fitsaharanao dia ny fahasamihafana eo amin'ny fefy sy ny fanombohana ny famerenana manaraka).
Azonao atao ny mamerina fohy lava kokoa na kely kokoa, na dia milomano mahitsy 30 minitra (tena T-30 aza). Ireo fari-piadidia manan-danja dia ny halaviran-dàlana tokony ho 30 minitra ary ny haingana indrindra dia maharitra hatrany mandritra io fotoana io. Ny haavon'ny tenanao na ny hafainganam-pandehanao dia mifanaraka amin'ny paosinao (EN2). Izany no tanjonao hitazomana ny karazana EN2.
Raha hitazona 4: 15s ho an'ny 300 taona eo ho eo, dia ny paikady EN2 ho 100 dia ...
1:25 isaky ny 100
Amboary ny zava-drehetra hatramin'ny segondra, ataovy ny matematika, ary ovao ny minitra sy segondra avy eo:
4 minitra: 15 segondra = 255 segondra isaky ny 300
255 is divided by 3 (one hundred) = 85 seconds per 100
85 segondra isaky ny 100 = 1 minitra: 25 segondra isaky ny 100
Fanamarihana: Tsy maintsy manao fanitsiana kely ihany koa ianao mandritra ny 100 yards na latsaka kely, manodinkodina ny: 02 segondra isaky ny 100 - izany dia mampandeha ny paikady ho an'ny 100 1:23 ho an'ny halavirana 100 na latsaka, ary 1:25 ho an'ny halavirana mihoatra ny 100s.
Ny paikady VO2Max (EN3) dia matetika: 01 hatramin'ny: 03 segondra haingana kokoa noho ny dingana (EN2).
Mifototra amin'ilay test de l'exemplie etsy ambony, dia ny:
EN2 miampy karazana 100 ary fohy kokoa = 1: 23/100 na: 20.7 segondra / 25
EN2 mandeha lavitra noho ny 100s = 1: 25/100 na: 21.2 segondra / 25
EN3 am-bisikilety 100s ary fohy kokoa = 1:20 na: 20 segondra / 25
EN3 ho an'ny halavirana mihoatra ny 100s = 1: 22/100 na: 20.5 segondra / 25.
Raha mijery ity haingana 100 isaky ny elanelam-potoana samihafa ity dia:
Dingana ahafahana miverina = 25 , EN2 Torolalana = 0:20 , EN3 Tanjona Time = 0:20
Averina amin'ny famerenana = 50 , EN2 Tanan'ny tanjona = 0:41 , EN3 Tanjona Time = 0:40
Afindra amin'ny hoe averimberina = 75 , EN2 Tanan'ny tanjona = 1:02 , EN3 Tanjona Time = 1:00
Dingana ahafahana miverimberina = 100 , EN2 Torolalana = 1:23 , EN3 Tanjona Time = 1:20
Dingana ahafahana miverina = 125 , EN2 Tanan'ny tanjona = 1:46 , EN3 Tanjona Time = 1:42
Dingana ahafahana miverina = 150 , EN2 Tanjona Time = 2:07 , EN3 Tanjona Time = 2:03
Dingana ahafahana miverimberina = 175 , EN2 Goal Time = 2:28 , EN3 Tanjona Time = 2:23
Afindra ny Repeat = 200 , EN2 Goal Time = 2:49 , EN3 Tanjona Time = 2:44
Dingana ahafahana averina amin'ny 300 , EN2 Tanjona Time = 4:14 , EN3 Tanjona Time = 4:06
Dingana ahafahana miverimberina = 400 , EN2 Tanjona Time = 5:39 , EN3 Tanjona Time = 5:28
Distance of Repeat = 500 , EN2 Goal Time = 7:05 , EN3 Tanjona = 6:50
Koa ankehitriny ... Ahoana ny fomba fampiasako ireo fiaramanidina an-dranomandry eny amin'ny toeram-pisakafoanana?
Ao amin'ny dobo filomanosana, ahoana no ahafantaran'ny mpilomano fa mahavita milomano ny vokatra fanatanjahantena? Izany dia miankina amin'ny vokatra izay tianao amboarina - anaerobic na aerobic metabolism. Ny filomanosana rehetra dia manana singa amin'ny tsirairay, miaraka amin'ny fandraisan'anjaran'ny asa aerobika rehefa mitombo ny fihenan'ny fihenana. Ahoana ny fomba fampiasanao fiofanana aerôbika na fatoriana?
Raha te-hanao setroka hanatsarana ny làlan-kiheba ianao raha tsy manamboatra fako tafahoatra (matetika noheverina ho toy ny setry EN2), afaka manao 18 x 100 @ 1:45 ianao, mihazona 1:23 isaky ny 100.
Mila 30 minitra izany ary mamela: 20 segondra miala sasatra eo anelanelan'ny famerimberenana - ny asanao dia ny mitazona ny haavon'ny kitapo manontolo. Eo amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra dia azonao atao izany satria fantatrao fa hetsika marina izany. Ny ohatra iray hafa dia mety ho 6 x 400 @ 6:00, mitazona 5:39 isaky ny 400.
Inona no atao hoe fahadisoana amin'ny fahadisoana? Araka ny asehon'ny tabilao etsy ambony, ny hafainganan'ny 3% hikatroka dia hanosika anao hiakatra amin'ny ambaratonga manaraka. Tokony ho marina araka izay azo atao ianao amin'ny fihazonana ny tanjonao ho an'ny nomerao. Izany dia haka traikefa - dia aza kivy raha toa ianao amin'ny "voalohany manerana ny sarintany" amin'ny fotoana mahamety izany. Ho fantatrao ny fihetseham-pon'ny haingana toy izany; Ahoana ny fomba ifandraisanao ny ezaka ataonao amin'ny tena haingana. Rehefa manatsara ny fari-piainanao ianao, ary mihamatanjaka ny paikady dia izao no fotoana hamerenana ny fitsapana hamerenana indray ny tanjona.
Andro vitsy dia tsy ho vitanao ny mihazona ny "prescribed" paingotra.
Fa nahoana no tsy? Mety ho efa tara loatra ianao ny alina talohan'io, nisakafo antoandro, adino ny misotro vinaingitra ampy, na mbola reraka amin'ny hazakazaka omaly. Amin'ireny tranga ireny dia tokony ho tsara ny vatanao sy ny atidohanao - raha tsy afaka manao ny asa ianao dia ovao izany! Mora ny milomano, mifantoka amin'ny teknikanao. Miverena amin'ny fotoana manaraka ary vonona ny hanao ilay asa.
Ny ambiny dia anisan'ny drafi-pandaminana iray manontolo. Raha tsy misy izany, dia tsy afaka manatanteraka ny asa amin'ny fepetra marina ianao raha te hahazo ny vokatra mendrika anao.
Andramo izao fomba izao handrafetana ny fampiasana paikady ho an'ny sehatra samihafa. Raha mandinika ny fomba anaovanao ianao, dia afaka manamboatra fanamafisam-peo sy fanavaozana eo amin'ny paosinao ianao rehefa manatsara. Efa ho 30 minitra eo ho eo ny fepetra EN2 izay azonao ampiasaina haingana indrindra dia azo ampiasaina hanavaozana ny paosinao.
Misy jiro mandomandina ve tsy mamela volavelona manodidina ny masonao?
Feno fankalazana ny Lalom-pifaliana ny Alakamisy
Top 5 Swimming Races tamin'ny folo taona lasa
Fotoana mahafinaritra amin'ny tantaran'ny Swimming Swimming
Inona no hohaninao alohan'ny miala sasatra maraina?
Aquaphobia-Tahotra ny rano
Ahoana matetika no tokony hanadio ny sidina filalaovana dobo filomanosana?
Atsaharo ny fisotroan-dronono eny an-jaridaina
Ny fahasamihafana eo amin'ny Swimming Swimming and Swimming Swimming
Ny Libra Dark Side
Fitomboana sy fihodidin'ny mponina ao amin'ny Revolisiona Indostria
Ranomasimbe Deep: Tantara sy ny zava-nitranga
Ny Top 25 Topy Great Groups
Ahoana ny fomba hanaovana ny kanoke J-Stroke
Drafitry ny lesona Dingana Dingana # 4 - Fitantanana fitarihana
Firy ny sekoly tokony hampihariko?
Book Review: 'Fety fialantsasatra'
Ady sefon'ny Amerikanina: Jeneraly Jeneraly Alexander Hayes
The 8 Best SAT / ACT Online Tutoring Services hividy amin'ny 2018
Understanding the Capillary Fluid Exchange
Wonder New Wonders of the World Printables
Ahoana no Hahazoanao Lanitra ao Amin'ny Afobe Mainty?
Ny fizotran'ny Hetsika fanesorana: 1830 - 1839
Nahoana no maro ny olona tia ny zava-misy? Asehoy "Big Brother"
Fahatakarana sy fampiasana karazana Data Array ao Delphi
Ireo Apps Top 4 fianarana mozika halefa anio
Mahaiza mazoto avy amin'ny famaha olana momba ny solosaina
Tafiozy mena: ny antony sy ny vokatra
Sary mampiavaka: Fampisehoana loko isan-karazany
Olmec Timeline sy famaritana